किड्नी बिक्रीमा भन्दै विज्ञापन टाँस्ने युवकले रुँदै सुनाए – Dainik Sangalo
किड्नी बिक्रीमा भन्दै विज्ञापन टाँस्ने युवकले रुँदै सुनाए
October 6, 2020 292
नेपालमा मानव अंग बेच्ने कार्यलाई गैरकानुनी मानिन्छ ।
यो कुरा उनलाई पनि थाहा छ । तर पनि आफ्नो बाध्यता भएका कारण यस्तो विज्ञापन गरेको उनले बताएका छन् । आफ्ना नातेदार र परिवारका सदस्यलाई मात्र अंग दिन पाइने कानुनी प्रावधान छ । प्रत्यारोपण गर्न पर्ने अवस्था चिकित्सकले पुष्टि गरेपछि मात्र परिवारका सदस्यले मात्र दिन मिल्छ । तर दुई हात मुख जोड्ने समस्या भएपछि आफुले यस्तो गर्नुपरेको धामीले बताएका छन् ।
Prevचीनले यसरी पाइपमार्फत सिधै नेपालमा पेट्रोल पठाउने, भारतमा हंगामा,! (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextहातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष
रमेश र नन्दा बैवाहिक जीवनमा बाँधिए, बधाई दिन पुगिन् कल्पना ! साथमा ज्ञानेन्द्र शाही यो हेर्नुस
भोलि वि.सं.२०७७ साल मंसिर मंसिर,मंसिर ०२ गते यस्तो छ तपाईको राशिफल !